* Light Of Myanmar *: September 2007
Posted by * In Search of Truth * at 8:28 PM 11 comments Links to this post
၁၉၈၈ တုံးကလို လူထုအုံကြွမှုဟာ ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို သတိထားမိ ကျပါသလား ခင်ဗျာ။ အကြောင်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ဟာ မဟာဗျူဟာ အရ အရေးမပါတော့ ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်မှုတွေကို နေပြည်တော်ကပဲ လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ ရေရှည်လုပ်နိုင်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူတွေ နေရာက စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မိမိအလုပ်အကိုင်တွေ ပြစ်ပြီး ဘယ်လောက် ကြာကြာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြနိုင်မှာလဲ? တစ်လ ? နှစ်လ ? သုံးလ ? ။ သုံးလဆိုတာ အလွန်ဆုံးပါ။ ခြေကုန် လက်ပန်း ကျလာပြီး တဖြေးဖြေး တိတ်ဆိတ်သွားမှာပါ။ စားဝတ်နေရေးကလဲ ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ နောက်ဆုံးတော့ ဆန္ဒပြပွဲ ကျဆုံးသွားမှာပါ။
အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ နအဖ ဆင်းသင့်ပြီ (၀ါ) အပြောင်းအလဲ လုပ်သင့်ပြီ ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိအစိုးရဟာ နိုင်ငံစီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း မရှိဘူးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ (စကားမစပ် အစိုးရတခု အနေနဲ့ နအဖ လုပ်ရပ်ကို ရက်စက်တယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင် သေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရတွေက သတင်းဌာနတွေ အကူအညီနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားလို့ သူတို့ လူသတ်မှုတွေက မသိချင်းဖြစ်ပါတယ်။) ဒီတော့ နိုင်ငံစီးပွားရေးပြန်လည် ဦးမော့ လာအောင်နဲ့ နိုင်ငံတကာအလည်မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံ တင့်တင့်တယ်တယ် ဖြစ်လာဖို့ နအဖဆင်းသွားအောင် (၀ါ) အပြောင်းအလဲဖြစ်လာအောင် ညီညီ ညွတ်ညွတ် လုပ်ရုံနဲ့ မရတော့ ပါဘူး။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး လုပ်တတ်ဖို့လဲ လိုလာပါပြီ။
ကျနော်တို့ နအဖ ဆင်းဖို့ဆိုတာ ဘယ်နှစ်လအထိ ဆန္ဒဆက်ပြရမလဲ မသိပါဘူး။ ရန်ကုန်ဟာ အရင်လို အရေးပါတဲ့မြို့မဟုတ်တော့ တစ်လ ၊ နှစ်လနဲ့ ထူးခြားလာမယ်လို့ မျှော်လင့်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပီး စစ်တပ်ကို ဆဲနေတာထက် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ လုပ်သင့်တာတွေ ဆွေးနွေးသင့်ပီ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေရှည် ဆန္ဒပြပွဲတွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ စီမံကိန်းချသင့်ပါပြီ။
အရင်တင်ပြခဲ့သလိုပဲ ဆန္ဒပြသူ အနာတရ မဖြစ်တဲ့ နည်းလေးနဲ့ စတင်စေချင်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ အိမ်တွေမှာ မနက် ၊ နေ့လည် ၊ ညနေ၊ ည နေ့စဉ် လေးကြိမ် ကဒ်ဆက်တွေနဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ မေတ္တာပို့နည်းကို အသံအကျယ်ချဲ့ပီး ဖွင့်စေချင်ပါတယ်။ အစိုးရကို အပြောင်း အလဲလုပ်ဖို့အတွက် ဆန္ဒပြတဲ့ သဘောပါ။ ဒီအလုပ်ဟာ လုပ်တဲ့သူအတွက်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်၊ အန္တရယ်မရှိပါဘူး၊ နောက်ပီး လုပ်ရတာ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့အတွက် လူတိုင်းလိုလို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေရှည်လည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လူစုပြီး တလမ်းဝင် တလမ်းထွက် မေတ္တာသုတ် ရွတ်စေချင်ပါတယ်။ စစ်တပ် (၀ါ) လုံခြုံရေးတွေ လာရင် လူစုအမြန်ခွဲပါ။ ထိပ်တိုက် မရင်ဆိုင်ပါနဲ့။ မိမိရပ်ကွက်ထဲမှာ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဖို့ လူစုရတာ ပိုပြီးလွယ် နိုင်ပါတယ်။ အန္တရယ်လဲ ကင်းပါတယ်။ အဲဒါလေးတွေ ဖြစ်နိုင်လား စဉ်းစားကြည့်ကျပါဦးခင်ဗျာ။
အနှစ် ၂၀ စောင့်ချင်သေးလား
ဒီတခါ မအောင်ရင် နောက်ထပ် အနှစ် ၂၀ လောက် ကြာမှ အခုလို အခွင့်အရေးမျိုးကို ထပ်စောင့်ရမှာပါ။ ကျနော်ကတော့ အဲလောက် မစောင့်စေချင်ဘူးဗျ။ နိုင်ငံလည်း နလန်မထူတော့ဘူး ဖြစ်နေပြီ။ အခုလူတွေ ကသတင်းတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ခံနေပါတယ်။ သတင်းတပုဒ်မကျန် နားထောင် ကျပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ဘာလုပ်ပေးမလဲ စောင့်မျှော် နေကျပါတယ်။ အမေရိက လာလေမလားလို့လဲ မျှော်နေပါတယ်။ ကျနော့အမြင်ပြောရရင် လက်တွေ့ကျကျ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ ဆိုတာကို အဓိကထား စဉ်းစားသင့်ပြီထင်ပါတယ်။ အချိန် မနှောင်းခင်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော် အခု စဉ်းစားထားတာလေးကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မသင့်မြတ်တာ မေ့ထားပြီး လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်လား စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by * In Search of Truth * at 8:46 PM 1 comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 9:53 PM 17 comments Links to this post
ကျနော်ကတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကို ပြည်သူလူထု အားကိုးလေးစားတဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ စစ်တပ်ထဲမှာ ခေတ်မှီတပ်မတော် ဖြစ်လာအောင် ကိုယ်ကျိုးစွန့် လုပ်ကိုင်နေသူတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါအတွက် ကျေနပ် အားရ ဖြစ်မိပါတယ်။ အခုတော့ တပ်မတော်ဟာ စစ်တပ် အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ ဓါတ်ဆီဈေးတက်ပြီး အကြပ်အတည်းဖြစ်လို့ လမ်းတွေပေါ် ဆန္ဒထွက်ပြတဲ့ ပြည်သူတွေကို ပစ်နေပါပြီ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ဂုဏ် ပြန်တက်လာဖို့ကတော့ မျှော်လေတိုင်းဝေး ဖြစ်ပြီထင်ပါတယ်ဗျာ။
ဆန္ဒပြရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း ဒီမိုကရေစီလိုချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှုပါ။ စီးပွားရေးကျဆင်းနေတာလည်း စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ထားလို့ ဆိုတာ ကျနော်လက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီမိုကရေစီ သမားတွေကို အမြဲ အပြစ်တင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေမြေသံယံဇာတ ကောင်းတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ထမင်း တနပ်တောင် ကောင်းကောင်း မစားနိုင်တဲ့ အထိရောက်သွားတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဦးရှုမောင်တုံးကလည်း တိုင်းပြည် ဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုနအဖ လက်ထက်မှာတော့ ပြည်သူလူထု စားစရာမရှိအောင် ဖြစ်နေတယ်။
နအဖ ပြည်သူတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းနေတာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ? ကြေးမုံ သတင်းစာထဲမှာ ရေးထားတာတွေ လာမပြောပါနဲ့။ ဒီမိုကရေစီသတင်းဌာနတွေက ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ ရဲတွေကို ဥပဒေနဲ့ အပြစ်ပေးတယ်ဆိုပြီး ပြောပေမယ့် ဘယ် ဒီမိုကရေစီရဲကမှ ဥပဒေကို လေးစားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နအဖလဲ ဘာထူးလဲ။ သတင်းစာထဲမှာတော့ ဘာလုပ်တယ်၊ ညာလုပ်တယ်နဲ့ စွပ်ပြော။ တကယ်တမ်းတော့ ပြည်သူတွေ တနေ့တခြား စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းလာတာပဲ မဟုတ်လား။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ . . . . နအဖ တွေ့သမျှလူကို ပိုက်ဆံမပေးပဲ ခိုင်းနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သံယံဇာတ ပေါကြွယ်တဲ့နိုင်ငံ မဟုတ်လား၊ စီမံကိန်း အတွက်မြေတွေကို သိမ်းချင်တိုင်း သိမ်းနိုင်တဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်လားဗျာ။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံး မြန်မာ ပြည်သူလူထု သည်းခံခဲ့တာပဲမဟုတ်လား ။ အဲလောက် ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကိုတောင် ထမင်း နပ်မှန်အောင် မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ဘာအတွက် အစိုးရ လုပ်နေသေးလဲ။ လူထုကတောင် ဆင်းခိုင်းစရာ မလိုပါဘူး။ အခုဟာ ဘယ်လောက် ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဗျာ။ ဓါတ်ဆီဈေးတက်တာကို ညှိပေးဖို့ တောင်းဆိုတာကို တချက်လေးမှ စဉ်းစားမပေးဘူး။ ပိုဆိုးတာ သတင်းစာတွေထဲမှာ ဓါတ်ဆီဈေးတက်တာနဲ့ ပြည်သူတွေ မဖြစ်စလောက်ပဲ ခံရတယ် ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ရေးထားတယ်။ ဒါဟာ ပြည်သူတွေကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လောက်ခံပြင်းဖို့ကောင်းလဲ။ ဒီအစိုးရ ဆက်အုပ်ချုပ်သင့် ၊ မသင့် ခေါင်းထဲထည့်ပြီး စဉ်းစားဖို့တောင် မလိုတော့ပါဘူး။
ကို oppositeye ရဲ့ ဘလော့မှာ တပ်မတော် သားတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ယူဆချက်တွေကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ သူ့ဘလော့မှာ ဒုတ်ကိုင်၊ ခဲကိုင်နေတဲ့ ရဟန်းတွေနဲ့ လူတွေရဲ့ ဓါတ်ပုံကို ပြသထားပါတယ်။ သဘောကတော့ အကြမ်းဖက်လာတဲ့ အတွက် စစ်တပ်က ပြစ်ရတယ် ပေါ့ဗျာ။
ဒီမိုကရေစီဘက်နဲ့ နအဖ တဖက်ကို တဖက် ဆန္ဒပြပွဲမှာ ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် သံဃာအတုတွေ သုံးတဲ့အကြောင်း အပြန်အလှန် စွပ်စွဲကျပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ နှစ်ဖက်စလုံးကို မယုံဘူးဗျ။ ထားလိုက်ပါ သံဃာအတု သုံးမသုံးကလဲ အရေးလဲမကြီးပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ စစ်သားတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားသင့်တာလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဘက်မလိုက်ပဲ ယောကျားပီပီ အမှန်ကိုစဉ်းစားရပါမယ်။ ဒုတ်ကိုင်၊ ခဲပေါက်ရုံနဲ့ ပြစ်ခတ်သင့်သလား။ မျက်ရည်ယိုဗုံန်း၊ ရာဘာကျည်ဆံနဲ့ဆို လုံလောက်ပါပြီ။ တကယ်လို့ ရဲတွေ မနိုင်ဘူးဆိုရင် စစ်တပ်ကို အသုံးပြုသင့်လား? ရှင်းပါတယ်။ ဒုတ်ကိုင်ထားတဲ့ လူရမ်းကားလေး ၁၀ ယောက်လောက်ကို သတ်ဖို့က စစ်တပ်အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ ရဲပဲလုပ်ရမှာပါ။ ရဲမနိုင်ပဲ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ များလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ရှင်းပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ ဆင်းပေးပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူကို ပြစ်ဖို့နေနေသာသာ စစ်တပ်က မိုးပေါ်ထောင်ပြစ်ပြီး ခြိမ်းချောက်တာမျိုးတောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အခုတော့ လူအုပ်ထဲတောင် ပြစ်နေပြီဗျာ။ ကျနော်ကတော့ အရမ်းစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်သားတွေကို မဆဲပါဘူး။ စစ်သားတွေကို ဆဲတဲ့သူတွေကိုလည်း ဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်မှာပါ။ တပ်တွင်း ပုန်ကန်ဖို့လည်း အားမပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမိနဲ့အလှမ်းမှီတဲ့ စစ်တပ်အရာရှိတွေကို ပြည်သူတွေပေါ်မှာ ငြင်သာဖို့ဖျောင်းဖျပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ ပြည်သူအားကိုးနိုင်တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်လာရေးအတွက်ပါ။
Posted by * In Search of Truth * at 2:35 PM0comments Links to this post
ဒီနေ့ Newsweek မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို အနည်းငယ်သုံးသပ် တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါး အမည်ကတော့ Buddha Lessons ဖြစ်ပါတယ်။ ရေးထားတာကတော့ ၀ိပဿနာ (Mindfulness meditation) ရှု့လုပ်တာ တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ တွင်ကျယ်လာတဲ့ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီး သုံးသပ်မိတဲ့ အတွေးလေးများကို ဝေငှချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကနေဒါနဲ့ အမေရိကနိုင်ငံ တက္ကသိုလ်၊ ဆေးရုံ၊ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂိလိက ဌာနကြီးတွေမှာ ဘုရားရှိခိုးဖို့ နေရာတွေ လုပ်ပေးထားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဌာနအမည်သုံးပြီး လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ခရစ်စမတ် ရုံးပိတ်ရက်အတွက် Merry Christmas လို့ နှုတ်ဆက် စာတန်း သုံးတာ မရှိပါဘူး။ Happy Holiday လို့ပဲရေးရပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ကင်းရှင်းအောင် လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလဲ ဘာသာရေး (Religion) တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ မွတ်ဆလင်၊ ခရစ်ယာန် ၊ ဂျူး ဘာသာတွေနဲ့ တူတာ အချက်တချက်ပဲရှိပါတယ်။ ဘာသာရဲ့ အဆုံးအမတိုင်း နေထိုင် လုပ်ကိုင်သွားပါက သေပြီးနောက်မှာ ကောင်းရာရောက်မယ် ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ အဖြူနဲ့ အမဲလို ခြားနားပါတယ်။ အခုလိုရေးတာ တခြားဘာသာများကို နှိမ့်ချ ရေးသားချင်း မဟုတ်ပါ။ မှန်ကန်သော အချက်အလက် အနေနဲ့ တင်ပြချင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာသာ(Religion) တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတွက် တက္ကသိုလ်နဲ့ ဆေးရုံတွေမှာ ၀ိပဿနာ တရားထိုင်ခြင်းကို သင်ကြားမပေးခဲ့ပါဘူး။ တရားဝင်အရ ဗုဒ္ဓဘာသာကို Religion လို့ သတ်မှတ် ထားပေးမယ့် အနောက်နိုင်ငံသားများသိတဲ့ Religion ဝေါဟာရထဲမှာ မပါဝင်ဘူးဆိုတာ ယနေ့ ပညာတတ်များ လက်ခံ လာကျပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းလေး ရှုပ်နေပါတယ်။ မြန်မာစကားလုံး “ကိုးကွယ်ခြင်း (၀ါ) ဘာသာ” ကို “Religion” လို့ ဆီလျှော်အောင် ပြောဆို သုံးနှုံန်းနေပေမယ့် မတူညီဘူးဆိုတာ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာသာပြန် စာရေးဆရာများ သိမည်ထင်ပါသည်။ အံ့သြစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ “Religion” ဝေါဟာ၏ အမှန်တကယ် အနှစ်သာရသည် မြန်မာ စကား “ကိုးကွယ်ခြင်း” နဲ့ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Kentucky တက္ကသိုလ်က စိတ်ဆရာဝန် Ruth Baer က “ တချိန်တုံးကဆိုရင် ဆေးသိပ္မံပညာရှင်တွေဟာ ၀ိပဿနာကို စိတ်အထင်နဲ့ ပေါက်ကရလုပ်နေတယ်လို့ ယူဆခဲ့ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုတော့ အဲဒီလူတွေကိုယ်တိုင် ၀ိပဿနာကို အလေးအနက်ထား ရမယ် ဆိုတာ လက်ခံလာကျပါပြီ” လို့ပြောပါတယ်။ ဒီစကားမှာ တွေးစရာတွေပေါ်လာပါတယ်။ ဆေးလောကထဲမှာ ၀ိပဿနာ ခေတ်စားလာတာ ဆယ်စုနှစ် အတွင်းမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၀ိပဿနာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကတည်းက ပေါ်လာခဲ့တာပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင် တစ်ရာလောက်ကတည်းက လေ့လာပြီး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေဟာ နှိက်နှိက်ချွတ်ခွတ် လေ့လာတယ်ဆိုတာ မှန်ရဲ့လား။ ၀ိပဿနာရှိတာကို သတိမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့လည်း တမျိုးပေါ့ဗျာ။ အခုဟာ ရှိမှန်းသိရက်နဲ့ မလေ့လာကျတာပါ။
ဒီအပေါ်မျာ ကျနော် သုံးသပ်ချက် နှစ်ခုချမိပါတယ်။ ပထမတစ်ချက်ကတော့ သိပ္မံပညာရှင်တွေဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်နွယ်လာရင် အမြင်ကျဉ်းတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ခရစ်ယာန်နဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာတွေလို ဗုဒ္ဓဘာသာကို တရားသေ၀ါဒ (Dogma) ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကျပါတယ်။ ၀ိပဿနာကို သိပ္မံနည်းကျ လက်တွေ့ စမ်းသပ်တာမဟုတ်ပဲ သူတို့အထင်နဲ့ မှန်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရတဲ့အချက်ပါ။
ဒုတိယအချက်ကတော့ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဆရာဝန်တွေဟာ သာမန်လူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်အကြောင်းကို လေ့လာပြီး လက်တွေ့ လုပ်ကိုင် နေကျသူတွေပါ။ PhD စိတ်ဆရာဝန်ကြီး တွေကိုယ်တိုင် ၀ိပဿနာကို ပေါက်ကရ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တခုလို့ ယူဆခဲ့ကျပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ တရားတော်ဟာ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်တယ်လို့ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုယ်တိုင် မနေ့ တနေ့ကမှ သူတို့အမှားကို မြင်လာကျတာပါ။
ဒီမှာ မြန်မာလူငယ်တွေ သတိပြုသင့်တယ်လို့ ယူဆထား တာလေး ကိုတင်ပြချင်ပါတယ်။ မြန်မာလူငယ်တွေဟာ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ဝေဖန်တာတွေ ကြားနေရပါတယ်။ ခက်ခဲမယ်ထင်တဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း ဘုန်းကြီးတွေကို မေးကျပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို အတွေးအခေါ် ပညာရှင်ကြီး တယောက်ပမာ ဂုဏ်ယူကျပါတယ်။ တကယ်တော့ မြတ်စွာဘုရားဥာဏ်တော်ကို PhD ဆရာဝန်ကြီးတွေပင် လိုက်မမှီတဲ့အတွက် လူငယ်တွေ မဝေဖန်သင့်ပါဘူး။ သံသတရာ တလျှောက်လုံး ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေ ဝေဖန်လာရင် ဆရာဝန်ကြီးတွေ ဖြစ်ပျက်ပုံကို ဥပမာပေးပြီး တားမြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဖန်တာနဲ့ တွေးခေါ်တာ ကွဲပြားတယ်ဆိုတာ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ တရားတော်အပေါ်မှာ တွေးခေါ်ပါ။ မတွေးခေါ်တဲ့သူတွေဟာ ချဲဂဏန်းပေးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကို ကိုးကွယ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။
အနာမျိုး ၉၆ပါး အတွက် တရားတော်
၀ိပဿနာအစွမ်းနဲ့ အနာမျိုး ၉၆ ပါး ကုသနိုင်တယ်လို့ပြောရင် ယုံမယ်မထင်ပါဘူး။ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဆေးတွေဟာ ရောဂါမျိုးစုံပြောက်တယ် လို့ လိမ်ပြီးကြော်ငြာနေတော့ ကျနော့စကားကို ယုံမယ် မထင်ပါဘူး။ မယုံချင်နေပါ။ ဒီဘက်မှာတော့ လက်တွေ့ အသုံးပြုနေကျပါပြီ။
စိတ်ညစ် (Stress) ၊ စိတ်ဓါတ်ကျ(Depression) ၊ သတ်သေချင်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးကို ၀ိပဿနာ နဲ့ကုသနေကျပါတယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲနေတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေလည်း ဆေးတွေနေရာမှာ တရားထိုင်တဲ့နည်းနဲ့ အစားထိုးလာပါတယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှု နဲ့ရောဂါပိုးတိုက်ခိုက်ရေးမှာ အထောက်အကူပြုတယ်လို့ တွေ့ရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကင်ဆာနဲ့ AIDS လို ဆေးမရှိတဲ့ ရောသည်တွေလည်း တရားထိုင် နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်နဲ့ နာမ် ဆက်စပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားလည်း ဒီမှာသတိထားနိုင်ပါတယ်။ အရေပြား နီပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ရောဂါ အရေပြား ဝေဒနာ ရှင်တွေ တရားထိုင်ရင် လေးဆပိုမြန်ပြီးပြောက်တယ် ဆိုတာ တွေ့ရှိထားတယ်တဲ့။
လှချင်ပချင်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ ၀ိပဿနာ လုပ်ပါလို့ပြောရင် နောက်တယ်ထင်မလား။ မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ အတည်ပြောတာပါ။ အ၀လွန်နေတဲ့သူတွေ အ၀လျော့သွားအောင် ၀ိပဿနာကို အားကိုးနေပါပြီ။ တရားမှတ်ပြီး စားသုံးချင်းဟာ အစားလွန်တာ ကို ကာကွယ်ပေးတယ်တဲ့ဗျ။ ပိန်တဲ့ မိန်းခလေးတွေအတွက်တော့ သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းတဲ့ အကျိုးထူးခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 4:48 AM0comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 6:34 PM2comments Links to this post
မေတ္တာဆိုတာကို ချစ်ခြင်း၊ နှစ်သက်၊ မြတ်နိုးခြင်းရယ်လို့ အလွယ်တကူ မှတ်ယူ တတ်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ လေ့လာရင် မေတ္တာဟာ အဒေါသ စေတသိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ လောဘစေတသိတ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာ အလောဘ၊ မောဟစေတသိတ်ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟာ အမောဟဆိုတာပါပဲ၊ အဒေါသ ဆိုတာ ဒေါသရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် စေတသိတ်ပါပဲ။လူတစ်ယောက်ဒေါသ ထွက်နေပြီဆိုရင် ဒီလူ စိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒေါသစေတသိတ်ကို “စိတ်ဆိုး” ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ဖလှယ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် အဒေါသကိုတော့ “စိတ်ကောင်း၊နှလုံးကောင်း” လို့ ဝေါဟာရ ဖလှယ်ရမှာပါ။စိတ်ကောင်း၊ နှလုံးကောင်း ထားနိုင်သူဟာ မေတ္တာပွားများနေသူမည်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်း၊ နှလုံးကောင်း ရှိတဲ့ မိသားစုဟာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကို ခံစားကြရမှာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကောင်း၊ နှလုံးကောင်းရှိတဲ့ အကြီးအမှုးအုပ်ချုပ်တဲ့ဌာနတွေဟာ တိုးတက်ကြီးပွား အောင်မြင်နိုင်မှာ ဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆောင်းပါးကို ကိုရွာသားဘလော့မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။ မေတ္တာတရား လူတိုင်းထားနိုင်ပါစေ
Posted by * In Search of Truth * at 1:05 PM0comments Links to this post
လူမြင်ကွင်းမှာ ရဲတွေဟာ ပြည်သူတွေကို လက်လွတ်စပယ် လုပ်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ (မှတ်ချက် ။ ။ ရဲစခန်းထဲမှာ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူဘုံအလယ်မှာ လုပ်တာပါ) ရဲတွေဟာ ဘာကြောင့် လူမြင်ကွင်းမှာ အခုလို လက်လွတ်စပယ် လုပ်ရဲလဲဆိုတာတော့ မေးခွန်းတခု ဖြစ်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့ သိထားသလို ရဲတွေကို တရားပြန်စွဲလို့ ရတယ်ဆိုရင် (၀ါ) ဥပဒေက အပြစ်ရှိတဲ့ ရဲတွေကို အပြစ်ဒဏ် ပေးတယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ရဲတွေ အခုလိုလုပ်ရဲလဲ။ ရဲတွေက အဲလို တရားစွဲခံရမယ်ဆိုတာ မသိလို့လား။ သတိလွတ်ပြီး ဒေါသထွက်လို့ ဖြစ်သွားတယ်လို့ ပြောရအောင်ကလဲ တစ်ယောက်ထဲ လုပ်တာ မဟုတ်ပဲ သုံးလေးယောက်လောက် အတူတူ လုပ်ကျတာပါ။ ဒီတော့သုံးလေးယောက် သတိလက်လွတ် တပြိုင်တည်း ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါမှ မဟုတ် ရဲတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ အပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာ တကယ်မဟုတ်လို့လား။ ရဲတွေကတော့ ကျနော်တို့ထက် ဥပဒေကို ပိုသိမှာပါ။ အားရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။
အဖိုးကြီးကိုလူဘုံအလယ်မှာ ရဲ ငါးယောက်ထိုးကြိတ်ချင်း
ပထမဆုံးတင်ပြချင်တာကတော့ ရဲလေးယောက်က၀ိုင်းချုပ်ပြီး ထိုးကြိတ်တာခံနေရတဲ့ အဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ အဲလိုလုပ်နေတာကို လူတွေက ၀ိုင်းအုံကြည့်နေပါတယ်။ ရဲတစ်ယောက်ကတော့ မြင်းပေါ်ကနေ ကြည့်နေပါတယ်။ ရဲတွေလက်ထဲဘာထည့်ပြီး ထိုးလဲတော့လဲတော့ မသိပါဘူး။ အဖိုးကြီးခမျာ လက်မောင်းတခုလုံး သွေးတွေနဲ့ ကြည့်မကောင်းအောင်ပါပဲ။ လူကလဲသွေးအိုင်ထဲမှာ ပက်လက်လေး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး အဖိုးကြီးကို မေတ္တာပို့လိုက်ပါဦးခင်ဗျာ။
နောက်အဖိုးကြီးကတော့ ပိုပြီးအဖြစ်ဆိုးရှာပါတယ်။ သူ့ခမျာကားမောင်းရင်း ခါးပတ်ပတ်ဖို့ မေ့သွားတဲ့ အပြစ်တခုကြောင့် ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း လက်တစ်ခုလုံး ရစရာမရှိအောင် ဖြစ်ပျက်သွားပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရဲတွေရဲ့ နှိပ်စက်ချင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အသက်ကြီးမှ ကံဆိုးလေသူပါလားလို့လည်းတွေးမိပါတယ်။ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ
၇၅ နှစ်အဖွားကြီး Taser Gun နဲ့ပြစ်ခံရချင်း
မယုံကြည်နိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးပါ။ Taser Gun နဲ့ 75နှစ်အဖွားကြီးကို ရဲက ပြစ်ခဲ့တယ်တဲ့။ Taser Gun ဆိုတာ လူကိုသေစေတဲ့ လက်နက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းနာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ခံစားရအောင် လျှပ်စစ်ဗို့အား အပြင်းစားကို ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်များပင် ချက်ချင်းပြစ်လဲသွားပြီး အလူးအလဲဝေဒနာကို ခံစားရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပြင်းလဲ သိသာပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်ပုံကတော့ 75 နှစ်ရှိတဲ့ အဖွားအို တစ်ယောက်ဟာ လူအိုရိပ်သာမှာနေတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းဆီကို အလည်သွားပါတယ်။ လူအိုရုံဝန်ထမ်းကတော့ ထုံးဆန်အတိုင်း မျက်နှာကြောမာပြီး ဆက်ဆံရေးညံ့သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ အဲဒီဝန်ထမ်းဆီမှာ အဖွားကြီးက သူ့ငယ်ချင်းအခန်း နံပါတ်စုံစမ်းကြည့်တော့ ၀န်ထမ်းက မပြောပြဘူးတဲ့။ ဒါနဲ့ အဖွားကြီးကလည်း အခန်းနံပါတ်မပြောရင် သူဒီနေရာကနေ မသွားဘူးဆိုပြီး တင်းခံနေပါတယ်။ ဒီတော့ ရဲကို ဖုံးဆက်ခေါ်ပါတယ်။ ရဲလာပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖွားကြီးကို Taser Gun နဲ့ပြစ်ပါတယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်း ရဲပီပီ တွေ့ရာ ပုဒ်မတပ်ပါတယ်။
အဲလိုအဖွားကြီးကို Taser Gun နဲ့ပြစ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ရဲချုပ်ကထောက်ခံတယ်တဲ့။ ရဲမေကလည်း သူ့အနေနဲ့ အဖွားကြီးက သူ့ကို ပြန်ထိုးဖို့ လုပ်တဲ့အတွက် ခုခံတဲ့သေ ဘာပါတဲ့။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လိမ်ရင် ပေါ်တင်လိမ်တယ် ဆိုတာ သိထားရင် ဆက်ပြောဖို့ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 5:51 AM0comments Links to this post
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိသင့် သိထိုက်သည့် အဘိဓမ္မာအခြခံတချို့ကို မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာ (အခြေခံ) Blog မှ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အပတ်စဉ် ကူးယူဖေါ်ပြပါမယ်။ အခွင့်အခါကြုံတုံး Blog ဆိုက်ကို တည်ထောင်သူ ဦးမောင်မောင် (ဟံသာဝတီ) နဲ့ မမေဓါဝီတို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်မှ ကျေးဇူးတင်ရှိ ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။
( ရွက်ဝါ ) မေး။ … ။ဆရာကြီးနဲ့ မရေ ... စိတ်ပိုင်း(၂) မှ (၄)ထိ အကုသိုလ်စိတ်(၁၂) ပါးအကြောင်း ဟောပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော် နားလည်ထားတာက စိတ် ဆိုသည် သိခြင်းသဘော ဖြစ်သည်။ စေတသိက် သည် စိတ်ကိုပြုပြင်သည့် အကြောင်းတရား အနေနဲ့ သိမှတ်ဖူးပါတယ်။ စိတ်ကို အခုလို ရေတွက်လို့ ရ၊ မရ ကျွန်တော်နားမလည်ပါ။ အရှင်ဇနကာ ဘိဝံသ၏ တစ်ဘ၀သံသရာ ထဲတွင် အကုသိုလ်စေတသိက်(၁၄) ပါး ရှိကြောင်း မှတ်သားရပါသည်။ ဒါကြောင့် အကုသိုလ်စိတ်(၁၂)ပါး နဲ့ အကုသိုလ်စေတသိက်(၁၄) ပါး မည်သို့ ကွာခြားသည်ကို ကြားနာလိုပါသည် ဆရာကြီးခင်ဗျား။
(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာ) ဖြေ။ … ။ စိတ်ဆိုတာ အာရုံကို သိခြင်းသဘော ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မှန်တယ်။ စေတသိက်ဆိုတာ စိတ်ကိုမှီတွယ်ပြီး စိတ်ကို ချယ်လှယ်တတ်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ အာရုံကိုသိခြင်းသဘောရှိတဲ့ စိတ်ကို စေတသိက်တွေက ၀င်ပြီး ချယ်လှယ်ကြလို့ စိတ် အရေအတွက် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားသွားရတယ်။ ပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်းမှာ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးက စေတသိက်သဘောကို …“စိတ်၌ မှီတွယ်၊ စိတ်ကိုချယ်၊ ငါးဆယ်နှင့်ဒွိက်၊ စေတသိက်” လို့ ရေးထားတယ်။ စေတသိက် သဘောဟာ စိတ်ကိုလည်း မှီတွယ်တယ်၊ စိတ်ကိုလည်း ချယ်လှယ်တယ်၊ အရေအတွက်က ၅၂-ပါး ရှိတယ်ဆိုတာကို လင်္ကာလေး စီထားတာဖြစ်တယ်။ ဥပမာပေးရရင် စိတ်ဟာ ကြည်လင်တဲ့ရေနဲ့ တူတယ်။ စေတသိက်က ဆေးရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ တူတယ်။ ကြည်လင်တဲ့ရေထဲမှာ အနီရောင်ဆေးထည့်လိုက်ရင် ရေနီ လို့ ခေါ်ရတယ်၊ အပြာရောင်ဆေး ထည့်လိုက်ရင် ရေပြာ လို့ခေါ်ရတယ်။ အဲဒီတော့ ဆေးရောင်အမျိုးမျိုးကြောင့် ရေရဲ့အခေါ်အဝေါ် အမျိုးမျိုးခေါ်ဆိုရသလို စိတ်မှာ လောဘစေတသိက် ယှဉ်လိုက်ရင် လောဘစိတ် လို့ခေါ်ရတယ်။ ဒေါသစေတသိက် ယှဉ်လိုက်ရင် ဒေါသစိတ် လို့ခေါ်ရတယ်။ စေတသိက်အမျိုးမျိုး ချယ်လှယ်ခံရတာကြောင့် စိတ်တွေလည်း အမည်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကုန်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်မှာ လောဘစေတသိက် အချယ်လှယ်ခံ (အခြေခံ) စိတ်က ၈-ပါး၊ ဒေါသစေတသိက် အချယ်လှယ်ခံ (အခြေခံ) စိတ်က ၂-ပါး၊ မောဟစေတသိက် အချယ်လှယ်ခံ (အခြေခံ) စိတ်က ၂-ပါး၊ စုစုပေါင်း ၁၂-ပါး ဖြစ်သွားရတယ်။ ကုသိုလ်စိတ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းတဲ့စေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့ အလောဘစေတသိက်၊ အဒေါသစေတသိက်၊ အမောဟစေတသိက် အစရှိတဲ့ စေတသိက်ကောင်းတွေက ချယ်လှယ်တယ်။လောဘ၊ ဒေါသ အစရှိတဲ့ စေတသိက်တွေက ချယ်လှယ်ရင် အပြစ်ရှိတဲ့ အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီး အလောဘ၊ အဒေါသ အစရှိတဲ့ စေတသိက်ကောင်းတွေ ချယ်လှယ်ရင် အပြစ်ကင်းတဲ့ ကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီလိုပဲ စိတ်အရေအတွက်က ဘုံအလိုက်လည်း ကွဲပြားမှု ရှိတာကြောင့် စိတ်ပေါင်း ၈၉-ပါးထိ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘုံအလိုက် ခွဲခြားရေတွက်ရင် … ကာမဘုံမှာ အဖြစ်များတဲ့ စိတ်ပေါင်း ၅၄-ပါး၊ ရူပဘုံမှာ အဖြစ်များတဲ့ စိတ်ပေါင်း ၁၅-ပါး၊အရူပဘုံမှာ အဖြစ်များတဲ့ စိတ်ပေါင်း ၁၂-ပါး၊ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဆိုတဲ့ လောကသုံးပါးမှ လွန်မြောက်တဲ့စိတ် (လောကုတ္တရာစိတ်) ပေါင်း ၈-ပါး၊စုစုပေါင်း … စိတ် ၈၉-ပါး ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီစိတ် အားလုံးဟာ အရေအတွက် များသော်လည်း အာရုံကို သိခြင်းသဘော တခုပဲ ရှိတယ်။ စိတ်ကိုအပြစ်ရှိအောင် ချယ်လှယ်တတ်တဲ့ အကုသိုလ်စေတသိက် ၁၄-ပါး ဆိုတာက …
၁။ မောဟ (အာရုံ၌ တွေဝေခြင်း)၊
၂။ အဟိရိက (မကောင်းမှုပြုရန် မရှက်ခြင်း)၊
၃။ အနောတ္တပ္ပ (မကောင်းမှုပြုရန် မကြောက်ခြင်း)၊
၄။ ဥဒ္ဓစ္စ (အာရုံ၌ ပျံ့လွင့်ခြင်း)၊ … အဲဒါက မောဟ အုပ်စု ၄-ပါး။
၅။ လောဘ (အာရုံကို တပ်မက်မှု)၊
၆။ ဒိဋ္ဌိ (အယူ အမြင်မှားမှု)၊
၇။ မာန (ထောင်လွှားမှု)၊ … အဲဒါက လောဘ အုပ်စု ၃-ပါး။
၈။ ဒေါသ (ကြမ်းတမ်း ပြစ်မှားမှု)၊
၉။ ဣသာ (မနာလိုမှု)၊
၁၀။ မစ္ဆရိယ (၀န်တိုမှု)၊
၁၁။ ကုက္ကုစ္စ (နောင်တ တဖန် ပူပန်မှု)၊ … အဲဒါက ဒေါသ အုပ်စု ၄-ပါး။
၁၂။ ထိန (စိတ်ထိုင်းမှိုင်းမှု)၊
၁၃။ မိဒ္ဓ (စေတသိက် ထိုင်းမှိုင်းမှု)၊ … အဲဒါက တစု။
၁၄။ ၀ိစိကိစ္ဆာ (ရတနာသုံးပါး ကံ ကံ၏ အကျိုးကို တွေးတော ယုံမှားမှု) အဲဒီ ၁၄-ပါးက စိတ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အစုလိုက် အစုလိုက် ယှဉ်တတ်ကြတယ်။ အဲဒီ ၁၄-ပါး ကြောင့် အကုသိုလ် စိတ် ၁၂-ပါး ဖြစ်သွားရတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် စိတ် နဲ့ စေတသိက် ကွဲပြားလောက် ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ မရှင်းတာရှိရင် ထပ်မေးပါ။ စေတသိက် အကြောင်းက စေတသိက်အပိုင်းမှာ ပြောပြဦးမှာမို့ လောလောဆယ် ဒီလောက်ပဲ ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by * In Search of Truth * at 8:01 PM0comments Links to this post
အီတလီမှာ ဆန္ဒပြသူ ၅၇၀ကျော် ဆေးရုံတင်ရတဲ့အထိ လူမဆန်စွာရိုက်နှက်ခံရခြင်းနဲ့ ယုတ်မာတဲ့ ရဲများအကြောင်း
ပထမဦးဆုံး BBCကို အရမ်းချဉ်မိတဲ့ ခံစားချက်လေး ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အကြောင်းပြောရင်း အစပျိုးချင်ပါတယ်။ BBC ရဲ့ Ghosts of G8 haunt Genoa သတင်းမှာ အီတလီရဲတွေ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ အကြောင်းရေးသား ထားပါတယ်။ အဲဒီသတင်း အစမှာ 9/11 al-Qaeda အဖွဲ့မပေါ်မီ လူထုရဲ့ အမုန်းဆုံးဟာ Globalization ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြအဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ ပထမပိုင်း စာပိုဒ်တွေဟာ WTO နဲ့ G8 ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ အဖွဲ့တွေကို သိက္ခာချတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေမှာ အကြမ်းဖက်တဲ့ အစဉ်အလာ ရှိတယ်လို့ ထင်မြင်အောင် တင်ပြ ထားတာလည်း အရမ်းကို သိသာနေပါတယ်။ သတင်းဖတ်သူတွေ အနေနဲ့ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို လူမဆန်စွာပြုမူခဲ့တဲ့ ရဲတွေအပေါ်မှာ ထောက်ခံချင် စိတ်တွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ BBC အဲလို ဆိုက်ဝါး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဖြစ်ပျက်ပုံလေးကို တချက်လောက် လေ့လာ ကြည့်ကျ ရအောင်။
2001 ခုနှစ် အီတလီ နိုင်ငံ Genoa မြို့မှာ G8 အစည်းအဝေးကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ G8 ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲကြီးများလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူနည်းစုကတော့ မီးလောင်ဗုံးတွေနဲ့ ရဲတွေကို တိုက်ခိုက်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ရဲကားတချို့ မီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမီးလောင်ဗုံး ပြစ်တဲ့သူတွေဟာ အီတလီစွမ်းအားရှင်တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ တထစ်ချပြောနိုင်ပါတယ်။ ရဲတွေကို ဓါးနဲ့ဝင်ထိုးတဲ့သူဟာ အမှန်တကယ် ဆန္ဒပြသူမဟုတ်ပဲ အရပ်ဝတ်ရဲ (အီတလီစွမ်းအားရှင်)ဆိုတာ ရဲတွေကိုယ်တိုင်လည်း ၀န်ခံထားပါတယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဒီမိုကရေစီရဲတွေရဲ့ မင်းမဲ့စရိုက် အပြုအမူတွေဟာ မြင်လို့ မကောင်းအောင်ပါပဲ။
G8 ဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးရက် မတိုင်မီ ညပိုင်းမှာတော့ ဆန္ဒပြသူများ စခန်းလုပ်ထားတဲ့ ကျောင်းကို ရဲများဝင်စီးခဲ့ပါတယ်။ အထဲမှာရှိနေတဲ့ မိန်းခလေး၊ ယောကျားလေး တွေကို တိရိစ္ဆာန်များသဖွယ် ရိုက်နှက်ကျပါတယ်။ ကျောင်းထဲကနေ သွေးသံရွဲရွဲနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်နိုင်တယ် ဆိုရင် အဲဒီလူဟာ ကံအရမ်းကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ အများစုကတော့ လူနာတင်ကားတွေဆီ မပြီးသယ်သွားရတဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အမှန်အတိုင်း မြင်တွေ့နေရတာပါ။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ အစဉ်အလာအရ သတင်းထောက်များခေါ်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။ မီးလောင်ဗုံးတွေနဲ့ ဒုတ်တွေ၊ ဓါးတွေကို စားပွဲပေါ်မှာ ခင်းကျင်းပြသပြီး ဒီလက်နက်တွေဟာ သက်သေတွေပါတဲ့။ ဒါကြောင့် အကြမ်းဖက်လာမယ်ဆိုတာ သတင်းရတဲ့အတွက် အခုလိုဝင်စီးရခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရှင်းပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လိမ်ရင် ပေါ်တင်လိမ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရား သိထားတဲ့ လူတွေကတော့ ခံပြင်းရုံကလွဲလို့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ ရဲတွေ မငြင်းနိုင်လောက်အောင် သက်သေတွေထွက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူတို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ သက်သေခံပြစ္စည်းတွေ အားလုံးဟာ အတုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ ပစ္စည်းအစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဓါတ်ပုံမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ ဒုတ်တွေ၊ တူတွေဟာ ကျောင်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦးထဲကနေ သယ်ယူပြီး စားပွဲပေါ်မှာ ပြသထားခဲ့ချင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ အဲလောက်အထိ ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရပ် သူတို့လုပ်ခဲ့ကျတာပါ။ အဲဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲအရာရှိ 74 ရောက်တရားစွဲခံထားရပါတယ်။ တရားကတော့ 2008 မှာမှ အပြီးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးအနေနဲ့ ရဲအရာရှိတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့ အထိသာ အမြင့်ဆုံး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တရားခံအစစ် အမှန်ကို ရှာဖွေအပြစ်ပေးဖို့ဆိုတာ အိပ်မက်တခုပါ။ တရားခံအစစ်ဟာ ရဲအရာရှိ 74ယောက်လို့ ထင်ရင် . . . မေးခွန်းနှစ်ခုလောက် မေးကြည့်ပါမယ်။ ဥပဒေအကြောင်းသိတဲ့ ရဲအရာရှိ 74ယောက် စိတ်တူ ကိုယ်တူ၊ စည်းဝါးညီညီ ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်တာ ဖြစ်နိုင်လား? ကိုယ်တိုင် ဒုတ်နဲ့ရိုက်တဲ့ ရဲသား 200 ကျော်ကရော ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်ခိုင်းတဲ့ အမိန့်ကို နာခံတာ ရိုးသားပါသလား။ အချိန်ရရင် စဉ်းစားကြပါအုံးခင်ဗျာ။ အခုတော့ ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ပြီး အမှန်တရားတွေ ရှာလိုက်ပါဦး။
ကျောင်းကို ညဖက်ဝင်စီးပုံ (၀ါ) သားသတ်နေပုံ
Police in Brutal Raid on G8 Protesters' Press Center
Posted by * In Search of Truth * at 7:06 PM0comments Links to this post
Labels: ပြည်သူ့ဒုက္ခ, လိမ်ညာချင်း, လူအခွင့်အရေး, သတင်းဌာန, သတင်းမှား
အမေရိကန်အစိုးရ စွမ်းအားရှင်များ အကူအညီဖြင့် အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့များ အသုံးပြုချင်း
ယခင်အပတ်တုံးက ကနေဒါအစိုးရ ဆန္ဒပြပွဲမှာ အကြမ်းဖက်လာအောင် မသမာတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ကြံစည်ခဲ့ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုတင်ပြချင်တာ ကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံ Seattle မြို့ (1999 ၊ Clinton လက်ထက် ) WTO အစည်းဝေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ ရက်စက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုခဲ့ပုံကို မြန်မာလူမျိုးများ သိရှိလာအောင် ရေးသားလိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ အင်မတန် ရှုပ်ထွေးပြီး လိမ်ညာလှည့်ပတ်မှုများ ပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အများစုဟာ ငြိမ်းချမ်းစွာပဲ ဆန္ဒပြခဲ့ကျပါတယ်။ တီးလုံးတွေ အကတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အကျီ်အမည်းရောင်တွေ ၀တ်ထားတဲ့ လူနည်းစုဟာ အကြမ်းဖက်လာကျပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အင်မတန်ကို လက်ရဲ ဇက်ရဲနိုင် ကျပါတယ်။ တွေ့သမှ ဈေှးဆိုင်တွေ၊ကားတွေကို ဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်ကျပါတယ်၊ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ရဲတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အနီးအနားမှာ အခုလိုဖျက်ဆီးနေတာကို ၀င်ရောက်တားဆီးတာတွေ မလုပ်ပါဘူး။ အဆောက်အဦးတွေ သိမ်းပိုက်ပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်တာလဲ ၀င်မတားပါဘူး။ ဆွေးနွေးခန်းတစ်ခုမှာတော့ ရဲတယောက်က သူတို့ကို အထက်ကနေ ဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေကို သွားပြီး မတားဆီးရဘူးလို့ အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် အဲဒီအဖျက်သမားတွေဟာ သာမညလူတွေ မဟုတ်ပဲ U.S. စွမ်းအားရှင်တွေဆိုတာ သိသာနေပါတယ်။ အဲဒီ U.S. စွမ်းအားရှင်တွေ ဘာလုပ်လဲ? BBC တို့လို သတင်းကင်မရာတွေရှေ့မှာ သွားပြီး ဖျက်ဆီးတာတွေ လုပ်ပြပါတယ်။ သတင်းဌာနကြီးတွေဟာ ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ ဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်တယ်ဆိုပြီး TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ကျပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဘာဆက်လုပ်လဲ ကြည့်ပါ။ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ရာဘာကျည်ဆံတွေနဲ့ ပြစ်တာတွေ၊ ဖမ်းဆီးတာတွေ၊ ရိုက်နှက်တာတွေနဲ့ မျက်ရည်ယိုဗုံန်းခွဲ တာတွေကို အသုံးပြုလာပါတယ်။ လမ်းဘေးမှာ လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေကိုပင် ရဲတွေက တိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့တွေ (nerve gas) ပါတဲ့ မျက်ရည်ယိုဗုံန်း ကို အသုံးပြုခဲ့ချင်းပါပဲ။ ဆရာဝန်တွေက ဆန္ဒပြသူတွေမှာ အဆိပ်ဓါတ်ငွေ့ ရှုရှိုက်မိတဲ့ ဝေဒနာတွေ မြင်တွေ့နေရတယ်လို့ ထောက်ခံထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ ။ ဗီဒီယိုအောက်ဘက်မှာ အရေးကြီးအချက်အလက်လေးတွေ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
(၁) WTO ကို ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူတွေဟာ အကြမ်းဖက်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ဆိုးရှိပါတယ်။ အပေါ်က ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရင် အကြမ်းဖက်သူတွေဟာ U.S. စွမ်းအားရှင်တွေ ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ သတင်းဌာနကြီးတွေက U.S. စွမ်းအားရှင်တွေ အကြောင်း မထောက်ပြကျပါဘူး။ မြန်မာပြည် ကိတ်စတွေမှာ မသင်္ကာစရာတွေရှိနေရင် သတင်းဌာနကြီးတွေ အနေနဲ့ ထောက်ပြတဲ့ အစဉ်အလာရှိကျပါတယ်။ အခု ဘာကြောင့်လဲ။ အထူးသဖြင့် BBC သတင်းဟာ WTO ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူတွေဘက်က အကြမ်းဖက်ကြောင်း အခွင့်အခါကြုံတိုင်း ဆိုက်ဝါး လုပ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ။
(၂) ရဲတွေ မျက်ရည်ယိုဗုံန်း သုံးတာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေအပေါ်မှာပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ဖမ်းစီးတဲ့ စာရင်းမှာလည်း နာမည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် U.S. စွမ်းအားရှင်တွေကို မဖမ်းမိတာလဲ။ အမေရိကန်အစိုးရ လုပ်ရပ်ကို လူအများစု အားကိုးနေရတဲ့ သတင်းဌာနကြီးတွေ ဘာကြောင့် နှုတ်ပိတ်နေပါလဲ။
(၃) အကာအကွယ်အပြည့်အစုံနဲ့ ရဲတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယှဉ်ပြီး တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေဟာ အရပ်ဝတ်နဲ့ Marine တပ်သားတွေလို့ ယူဆထားပါတယ်။ ( Marine တွေဟာ တဖက်က အရပ်ဝတ် တဖက်က ဒိုင်းကာကွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ၁၀ လလောက်တင်ကြိုပြီး လေ့ကျင့်ထားကျပါတယ်။) ဒီမှာကျနော်တို့ သတိထားသင့်တာ အမေရိကန် ပြည်သူတွေဟာ စစ်တပ် ပြည်တွင်းရေးမှာ ၀င်ရောက်စွပ်ဖက်တယ်လို့ မြင်နေတဲ့ သဘောပါ။ ဒါဆိုရင်ကျနော်တို့ တတွေ လက်ခံထားတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ နိုင်ငံရေး ကင်းကွာရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ဟာ အမှန်တကယ် ရှိရဲ့လား စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါတယ်။
(၄) ပြည်သူတွေကို ချွေးသိမ့်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးကိုလဲ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ရဲချုပ်ဟာ ရဲတွေ အကြမ်းဖက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် အနားယူသွား ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အဲဒါတွေ ရဲချုပ်သူ့ ဆန္ဒနဲ့ လုပ်ခဲ့တယ်ထင်ပါသလား။ ဆန္ဒပြသူတွေ WTO ဆန့်ကျင်တာ ရဲချုပ်နဲ့ရဲတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားမထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါဆိုဘာကြောင့် ရဲတွေက အကြမ်းဖက်လဲ စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ။ အဖြေကရှင်းပါတယ် ရဲချုပ်နဲ့ ရဲတွေကို အထက်အမြင့်ဆုံး သမတ္တကလင်တန်လို လူမျိုးခိုင်းလို့ပါပဲ။ နို့မဟုတ်ရင် ရဲတွေ ရာဇ၀တ်မှုလုပ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး
(၅) ဓါတုဗေဒ အဆိပ်ငွေ့ (Nerve Gas)တွေ အသုံးပြုတယ်လို့ ယူဆနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တချို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီကိတ်စ အစိုးရနဲ့ သတင်း ဌာနကြီးတွေ နှုတ်ပိတ်နေလဲ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ကျနော်တို့တွေဟာ သတင်းဌာနကြီးတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ လိမ်ညာစကားများအောက်မှာ အိပ်မက်လှလှလေးတွေ မက်နေတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
Police-State Brutality of peaceful protesters in Seattle, December 1999
Seattle police charge as protesters challenge curfew
Police build up anti-riot forces in US cities
Posted by * In Search of Truth * at 3:06 PM0comments Links to this post
Labels: ပြည်သူ့ဒုက္ခ, လူအခွင့်အရေး, သတင်းဌာန, သတင်းမှား
Posted by * In Search of Truth * at 8:35 PM0comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 1:31 AM6comments Links to this post
ဘယ်အစိုးရလုပ်ရပ်ကို ရာဇ၀တ်မှု ခေါင်းစဉ် တပ်သင့်ပါလဲ
ဘေးဘက်ကပုံက အန်တီခင်မင်းဇော် Blog ကပုံပါ။ သူရေးထားတဲ့စာက
"ကျေးဇူးပြုပြီး လက်ဆင့်ကမ်း ရှာဖွေ သတင်းပေးကြပါ။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြသူများကို အခုလို ချုပ်နှောင်ဖမ်းဆီးသတဲ့။”
အန်တီ ခင်မင်းဇော်က နအဖ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်တာ ရာဇ၀တ်မှုလို့ အမည် တပ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးလဲ ရှိပုံပေါ်ပါတယ်။ အန်တီခင်မင်းဇော် ဗီဒီယိုနှစ်ခု ယှဉ်ကြည့်ပါအုံး။ တစ်ခုက အာဏာရှင်လို့ နာမည်ကြီးပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကြီးဆိုးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက နအဖ လုပ်ကိုင်ချက် နဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီမိုကရေစီအမေရိကန် အစိုးရ လုပ်ဆောင်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုကြည့်ပြီး ဘယ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရ လုပ်ရပ်က ရာဇ၀တ်မှု ခေါင်းစဉ်တပ်သင့်တယ် ထင်ပါလဲခင်ဗျာ။
Posted by * In Search of Truth * at 1:17 AM5comments Links to this post
Labels: မြန်မာနိုင်ငံ, လိမ်ညာချင်း, လူအခွင့်အရေး